Gopal Raj Mainali Biography | Hamro Kalakar
Biography last updated: 14th Dec, 2017
Facts of Gopal Raj Mainali
Contact Gopal Raj Mainali
Suggestion for Gopal Raj Mainali
Gopal Raj Mainali is Actor, Comedian. His marital status is Married.
नेपाली चलचित्रको प्रारम्भ कालदेखिकै कलाकार हुन् गोपालराज मैनाली । उनी नेपाली चलचित्रको फगत कलाकार मात्रै होइनन्, उनी समग्र नेपाली चलचित्र उद्योगको इतिहासको साक्षी पनि हुन् ।
उनलाई नेपाली चलचित्रका दर्शकले गोपालराज भन्दा पनि ‘चङखे’ भनेर धेरैरले चिन्छन् । नेपाली चलचित्रमा हास्उ विधा भित्राउने कलाकार नै उनै हुन् ।
चार दशक उनले हास्य अभिनेताका रुपमा नेपाली चलचित्रमा बेथित गरे । उनको पहिलो चलचित्र ‘हिजो आज भोली’ । वि.सं. २०२४ सालमा हीरा सिंहले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा उनको सानो भूमिका थियो ।
वि.सं. २०३३ मा नेपाल चलचित्र संस्थान अर्थात सरकारले बनाएको चलचित्र ‘सिन्दुर’ मा उनले अभिनय गर्ने मौका पाए । जहाँ उनको भूमिका थियो् ‘चङ्खे’ त्यही चरित्रले उनलाई चिनायो । दर्शक माधm लोकप्रिय बनायो । उक्त चलचित्रमा उनको जोडी थिइन्, ‘नक्कली’ अर्थात वसुन्धरा भुसाल । यो चलचित्रमा गोपालराज मात्रै होइन । यो जोडी चर्चाको शिखरमा रह्यो ।
अहिले पनि यी दुबैलाई उनीहरुको सक्कली नाम भन्दा पनि यही नामले धेरैले चिन्छन् ।
‘सिन्दुर’ मा अभिनय गर्नु पूर्व नै प्रकाश थापाले वि.सं. २०२९ मा ‘मनको बाँध’ मा चेतन कार्कीले भुसाललाई ‘डाँडाघरे साइँली’ र मैनालीलाई ‘पसलेको छोरा’को भूमिकामा खेलाउन चाहेका थिए । तर, गोपालराज मैनाली बिरामी भएपछि वसुन्धरा एक्लै परिन् ।
‘सिन्दुर’ले बनाइदिएको ‘चङ्खे र नक्कली’को छविकै कारण निर्देशक थापाले यो जोडीलाई जीवनरेखा, सन्तान, र कन्यादानमा पनि अभिनय गराए । ‘दाजुभाइ’, ‘के घर के डेरा’, ‘लक्ष्मणरेखा’ पनि यो जोडीले अभिनय गरेको थियो ।
गोपालराज चलचित्रको स्क्रिप्टले मात्रै होइन, उनको अनुहार र जिउको भाव भङ्गी र हाउभाउले पनि दर्शकलाई मजाले हसाउन सक्ने कलाकार हुन् । त्यसैले उनले आफ्नो् ४० वर्षे चलचित्र जीवनमा ६० भन्दा धेरै चलचित्रमा अभिनय गरे ।
चलचित्र ‘देउकी’, ‘पछ्यौरी’, मा पनि मैनालीले अभिनय गरेका छन् ।
प्रकाश थापाको चलचित्र ‘अधिकार’ मा पनि मैनाली र भाुषलको जोडी तय भएको थियो । तर, विडम्बना मैनाली बिरामी परे र उनको ठाउँमा आए राजाराम पौड्याल ।
‘सुब्बा साप’, ‘पाटीको बास’, ‘लौ मा‍र्यो’ मा पनि मैनालीलाई देख्न सकिन्छ । नायिका तथा सञ्चारकर्मी सज्जा मैनाली उनकै छोरी हुन् ।
Gopal Raj Mainali Photo Gallery
Gopal Raj Mainali Videos
✓ Dhiraj Magar
✓ Bijay Baral